Ny Sandals Foundation sy ny Hasbro dia manaparitaka ny hafaliana fialamboly ho an'ny ankizy Karaiba
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ny Sandals Foundation sy ny Hasbro dia manaparitaka ny hafaliana fialamboly ho an'ny ankizy Karaiba
Ankizy maherin'ny 10,000 no niaina fifaliana bebe kokoa tamin'ity fialantsasatra ity niaraka tamin'ny kilalao sy lalao vaovao natolotry ny Sandals Foundation ao amin'ny Christmas Toy Drive isan-taona.
Amin'ny maha sandan'ny Sandals Resorts sy Beach Resorts tsy mitady tombombarotra, ny Holiday Toy Drive fanao isan-taona an'ny Sandals Foundation dia hetsika kalandrie fototra nandritra ny 10 taona mahery tamin'ny fanomezana malala-tanana avy amin'ny mpiara-miasa sarobidy, Hasbro, Inc. kilalao ikona amin'ny lalao manerantany sy Orinasa fialamboly dia misy an'i Nerf, Magic: The Gathering, My Little Pony, ary Transformers.
Ho fanampin'izay, ny fanohanana ny Toy Drive isan-taona dia avy amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals and Beaches Resorts, mpitsidika mitsidika, ary mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny dia.
Na dia tsy notanterahina aza ireo fomban-drazana, dia nanamafy ny fanohanan'ny Tafiky ny famonjena, ny polisy, ny sekoly ary ny vondrom-piarahamonina teo an-toerana ny fomba fanao amin'ny fomba fanao amin'ity taona ity mba hizarana am-pitandremana kilalao maherin'ny 10,800 ho an'ny ankizy manerana an'i Karaiba - izany rehetra izany dia mitondra aza adino ny protokolan'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny firenena tsirairay avy.
Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Sandals Foundation, dia nanazava fa manoloana ireo fanamby nosedraina tamin'ity taona ity dia zava-dehibe ny mitazona endrika mahazatra, indrindra mandritra ny fialantsasatra.
“Fotoana majika ho an'ny ankizy ny Krismasy ary tsy tokony hisy tsy hitovizany amin'ity taona ity. Satria fotoan-tsarotra tokoa ho an'ny fianakaviana nanerana an'i Karaiba izany, vao maika zava-dehibe ho anay ny nanao izay azonay natao mba hitondra fifaliana ary, mazava ho azy, fahatsapana fanantenana amin'ny alàlan'ny fanomezana ireo fanomezana ireo. ”
"Ny mpiara-miombon'antoka sarobidy eto Hasbro," hoy hatrany i Clarke, "dia nanohana tokoa ny iraka nampanaovina anay, ary faly izahay fa afaka nahita fomba iray ahafahana mitondra ireto kilalao ireto soa aman-tsara any am-pelatanan'ny sasany amin'ireo zanakay mendrika indrindra."
Ny fandefasana kilalao dia natolotra tany Bahamas, Jamaica, Turks and Caicos, Antigua, St. Lucia, Grenada, ary Barbados.
Nanitatra ny fandrarana sidina UK hatramin'ny 12 Janoary i Russia
Nidina 77 isan-jato ny mpitsidika an'i Hawaii